Sagantaa SWO - Kamisa Adoolessa 1, 2021 ♫ sagalee qofaan - Independent Oromia
Sagantaa Kamisa Adoolessa 1, 2021
Oromoonni baay'inaan 1000 (Kuma-tokko) ol ta'an, Giddu-gala Oromiyaa, Ona Gidabarat keessatti hidhamuun gidirfamaa jiraachuu. Oromoota hidhamanii jiran kanneen keessaas baay'inaan 300'tti kan tilmaaman, Magaalaa Kaachis keessatti, mana dhiphoo keessatti baay'inaan hidhamuun, akkasumas, nyaata ga'aa fi wal'aansa fayyaa dhorkamuun dhibeelee daddarboo garaagaraaf saxilamaa jiraachuu.
Lola babal'ifannaa daangaa Poolisoota Humna Addaa Naannoo Somaalee fi hidhattoota Somaalee goseen Iisaa fi Guyyaa jedhamaniin, Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Lixaa, gandeen baadiyyaa Ona Mi'eessoo keessatti Uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jiruun, tikfatee-bultoonni Oromoo lama (2) iddoo loon ofii tikfatanitti ajjeefamuu fi tokko madeeffamuu.
Gama biraatiin immoo, WBO of-keessa dhoksitanii gargaaraa jirtu jedhamuun, Uummanni Oromoo hidhannoo ittiin loon ofii tikfatan, Loltoota MKII'n hiikkachiifamaa jiraachuu. Daafii kanaanis, tikfatee-bultoonni Oromoo diina qe'eetti itti-dhufe akka ofirraa hin deebisne taasifamuun gara qe'ee ofiitti deebi'uuf dirqamuu isaaniitiin, iddoowwan isaan loowwan ofii irra bobbaafatan tikfatee-bultoota Somaalee goseen Guyyaa fi Iisaan dhuunfatamaa jiraachuu.